Ogaden News Agency (ONA) – Jaaliyada Riyaad ee Wadanka Boqortoyada Sacuudi Carbiya oo Laguqabtay Shir Aad u Qiimo Badan
Jaaliyada Riyaad ee Wadanka Boqortoyada Sacuudi Carbiya oo Laguqabtay Shir Aad u Qiimo Badan
Posted by Daljir	/ July 24, 2015
Maanta ooy taariikhdu tahay 24/07/2015 waxaa jaaliyada Riyaad ee wadanka Boqortooyada Sacuudi Carbiya lagu qabtay shir aad u qiimo badan oo si heer sare ah loo soo agaasimay. Shirkan ayaa waxa siidi caadada ahayd logu furay aayadaha Quranka Kariimka ah iyo wacadi diini ah oo uu soo jeediyay Sh. Axmed oo dadka u dardaarmay alle kacabsiga iyo fadliga jihaadku uu leeyahay iyo in lays garab taago halganka xaqa ah ee Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadenya (JWXO) hormuudka katahay.
Waxaa codbaahiyaha lagu soo dhoweyay gudomiyaha faraca Riyaad Mudane Gaaxnuug oo dadka uga waramay hawlaha jaaliyada bilihii u dambeeyay wax qabadkii iyo qorsheyaasha u yaala ee mustaqbalka ah isagoo magacabay xubno cusub oo gudiga Maamulka Jaaliyadu ka koobanyahay. Sidoo kale waxaa hadalka lagu soo dhaweeyey Isuk Duwaha Jaaliyaadka Bariga Dhexe Mudane Sheekh Cabdullahi Ciraaaqi oo uga waramay dadkii madasha fadhiyay halganku meeshu marayo dibad iyo gudaba kuna guubaabiyay dadkii in ay hiil iyo hooba isla garab istaagaan halgankooda xaqa ah ee ogadeniya lagu xoraynayo kulana dardaarmay inay ilaashadan midnimada kana digtonaadan shirqoollada gumaysiga iyo adeegayashiisu ay meleegayaan waxa kaloo kahadaly xubno kaloo dhawra ah oo ka dhawaajiyay sidi halganka loo dardar galin lahaa.
Gabagabadii waxay Jaaliyadu udirtay habalyo iyo bogaadin dhamman dadka ka qaybqaadanaya halganka Somalida Ogadenya lagu xuraynayo gar ahaan ciidanka Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadeniya iyo madaxdooda shirku wuxuu canbareeyay gumaysiga iyo cidkastoo ku taageeraysa gumaadka shacabka ogadenya gumaysigu kuhayo. Shirkii ayaa kusoo dhamaaday jawi aad uwanaagsan.